Kulan looga hadlayo baahinta maamulka iyo hirgalinta hoggaan wanaagsan oo u furmay degmooyinka Jariiban, Eyl, Badhan & Bader bayla. – Radio Daljir
Kulan looga hadlayo baahinta maamulka iyo hirgalinta hoggaan wanaagsan oo u furmay degmooyinka Jariiban, Eyl, Badhan & Bader bayla.
Diseembar 28, 2011 12:00 b 0
Garoowe,Dec,28 -Waxaa maanta ka furmay magaalada Garowe kulan ay kasoo qeyb galeen 4 degmo oo kamid ah degmooyinka fog fog ee Puntland oo kala ah Bandar Bayla, Jiriiban, Eyl iyo Baran, waxaana kulankaan looga tashanayaa baahinta xukunka si loo gaarsiiyo deegaanada fogfog.
Kulankaan ayaa waxa uu soo gunaanadayaa sahan safar ah oo ay ku tageen degmooyinkan 4-taa guddiga hogaaminta iyo Hay’ada PDRC kaas oo lagu baarayay dhibaatooyinka iyo qorshayaasha horumarineed ee xiligaan socda.
Wasiir kuxigeenka arimaha gudadaha iyo dawladdaha hoose ee Puntland Cabdi Yaasiin Xirsi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in qorshahan lagu lafo guro si loo helo sharci dadka kala haga.
Wasiirka ayaa xusey in dadka la fahan siiyo muhiimada sharcigu leeyahay iyo sida uu uga weynyahay qabiilka,haduu ahaan lahaa sharciga islaamka iyo kan bulshaduba.
Shirkaan ayaa waxa uu soconayaa mudo laba cisho ah,waxaana lagu wadaa in la isku waydaarsado fikaradaha iyo qaabkii loo wajihi lahaa nidaamka xukun baahinta ee degmooyinka.
Bashiir Ahmed Abdi
Baahin: Khamiis, Dec 29, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Fadhigii mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee loo ballansanaa oo baaqday; Taliyaha cusub ee ciidanka bilayska Galkacyo oo la wareegay xilka, is-badelna ballan qaaday; Qurbajoogta Puntland oo dhaliilay sababaha looga reebay Taleex & Badhan barnaamijka horumarinta degmooyina.
Baahin: Salaasa, Dec 27, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. M/weyne Faroole & R/wasaare Gaas oo kulamo la yeeshay bulshada Qardho & Carmo, laguna soo dhaweeyey Bossaso; Warbixin ku saabsan kulan ay yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo la kulmay M/weyne Shariif; Maamulka degmada Ufeyn oo walaac ka muujiyey maraakiib shisheeye oo jariif xoogan ku haya dhul-xeebeedka degmada.